Umvelisi kunye noMthengisi wezoThutho loLwandle Ngexesha
Eyona ndlela ineendleko zokuhambisa izixa ezikhulu. Ngokusebenzisa ubudlelwane bethu obomeleleyo kunye nobude bexesha elide, i-GZ Ontime ikunika izisombululo eziguqukayo, ezinokuthenjwa nezikhuselekileyo zothutho lolwandle ....
Eyona ndlela ineendleko zokuhambisa izixa ezikhulu.
Ngokusebenzisa ubudlelwane bethu obomeleleyo kunye nobude bexesha elide, i-GZ yexesha lokuphumla ikunika ulwandle oluguquguqukayo, oluthembekileyo nolukhuselekileyo imithwaloizisombululo. Abathengi babuxabisile ubuchule bethu kuthutho lwaselwandle lwamazwe aphesheya ukuhambisa uthungelwano lwehlabathi oluquka amazwe nemimandla engamashumi amane anesithandathu. Babuxabisile ubuchule bokunxibelelana nezinye iinkonzo ezinjengokuthumela iimpahla ngenqwelomoya, imultimodalezothutho, iinkonzo zokuwela umda, okanye urhwebo lwendlu yamasiko.
Ngaphezu koku, abathengi bethu bayazi ukuba siyaliqonda ihlabathi ngokwembono yabo, kwaye sisebenzela ukubaxhasa kunye neshishini labo. Umxholo usebenza kuyo yonke into esiyenzayo, ukusuka ekufumaneni esona shedyuli ilungileyo yokuthumela ngenqanawa ukuya ekukhetheni eyona ndlela ilungileyo yokuyihlela; ukwahlula okanye ukwabelana ngemithwalo; ukudibanisa ezinye iinkonzo zokongeza ixabiso; kunye nokubonelela ngenkonzo ethembekileyo esemgangathweni. Ukubeka nje-asibavumeli abathengi basibeke phantsi.
Umthwalo ogcweleyo weContainer (FCL)
Ubudlelwane bethu obude kunye noluhlu olubanzi lwabathwali kuthetha ukuba sibekwe ngokufanelekileyo ukuze sifumane indawo kwiinqanawa kwaye sifumane iishedyuli eziza kusebenza, ngamaxabiso okhuphiswano. Iinkonzo zethu zeFCL zixhaswa ziinkqubo zokulandela umkhondo ezisekwe kwiwebhu ezikwenza ukuba ubonakale kwimeko yokuthumela.
Sinikezela ngokufikelela kumanqwanqwa e-premium e-FCL asebenza ngamandla kwi-chain chain. Ngeenkonzo ezihamba phakathi kweentsuku ezili-10 ukuya kwezi-50, sinamaqela asuka kwindawo esiya kuyo anokukunceda ukuba ulungiselele ukuthunyelwa ngakunye kweendleko, indlela, okanye ixesha lokuhamba.
Abathwali abathembekileyo nabathembekileyo
Sinenkontileka nabathwali abathembekileyo nabathembekileyo ukuqinisekisa ukuba iiseyile zakho zemithwalo ngexesha, njengoko kucwangcisiwe.
Sinikezela ngeenkonzo zepremiyamu kwizikhephe ezisuka e-China, ukuqinisekisa ukuba umthwalo wakho ongxamisekileyo ufika kwindawo oya kuyo ngexesha, kwanaxa ulwabiwo-mali lugqithisiwe.
Ngaphantsi kweContainer Load (LCL)
Iinkonzo zethu ezingaphantsi komthwalo wesikhongozeli zikunika ubhetyebhetye bokuhlangabezana neemfuno zakho, ngokuthembekileyo naphantsi kolawulo. Ukubonelela ngeenkonzo zethu zokudityaniswa, okanye iiNkonzo zokuManyaniswa kwaMazwe aMazwe amaninzi (MCCS) ukuthunyelwa okunzima ngakumbi, kukuxhasa kulawulo lweendleko zothutho kunye namaxesha okuhambisa. Iinkonzo zethu ze-LCL ziyaphuculwa ngumkhondo we-intanethi kunye nemisebenzi yokulandela umkhondo, ekunceda ukuba ufumane ulawulo ngokubonakala kokuthunyelwa.
Senza ukuba iTyathanga loNikezelo libe ngcono
Inethiwekhi yethu ye-LCL ibonelela ngoqhakamshelwano olungenakuthelekiswa nanto kunye ne-cadence kwiindlela ezinkulu zokuhambisa, ngelixa lenza ukuba abathengi bethu bakwazi ukwenza imali ngokusebenza ngokufumana uluhlu lweemfuno.
Ulawulo olungcono lokuNcitshiswa okungafaniyo
Sihlola itekhnoloji kwaye senza yonke inkqubo yokuhambisa ngokukhawuleza. Ukusuka ekushicileleni ulwazi lwabathengi ukuya kuvavanyo lokuqinisekisa, siqinisekisa umngcipheko wokuhlolwa kwamasiko uncitshiswe kakhulu.
Xa usikhetha, nokuba ufuna ngaphezulu kokujikeleza iinkonzo zaselwandle, siya kuhamba ngaphezulu nangaphaya ukuze senze ngokusesikweni ukuhanjiswa okufanelekileyo. Senza yonke into nokwenza yonke into yakhoezothutho amava ukuhlangabezana nokulindelweyo.
1.I-DDP (Umsebenzi oHlawulwayo wokuHanjiswa), iDDU (ukuHanjiswa koXanduva)
2.Port kwizibuko, umnyango ukuya emnyango, umnyango kwizango, izibuko emnyango
3.Ukucwangcisa kunye nokucwangcisa kwangaphambili
6. Ilizwe ezothutho amalungiselelo
7.Ukulandelela kunye nokulandelela.
Ukuthunyelwa kolwandle kumazwe aphesheya kunokuba nzima kakhulu ngokubhekisele kumaxwebhu, imimiselo, amaxabiso, kunye nendlela. Sigxininisa ekwenzeni lula le nkqubo, sikushiye ungenalo uxinzelelo kwaye wanelisekile.
Amava ethu abanzi kunye nezakhono zothutho lolwandle, zidityaniswe nenkonzo yabathengi bethu abahlukileyo zisenza sizithembe kwinto yokuba sinokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho.
Musa ukuba lilize. Amaxabiso asezantsi kakhulu okanye izithembiso ezilingayo kakhulu zihlala zifihla isimanga esibi. Ixesha lokuphuma le-GZ liya kuba lolona khetho lwakho lokuhambisa iimveliso zakho elwandle.
Egqithileyo Umdlulisi weNkonzo ye-FedEx esuka e-China ukuya kwi-Fed Ex Ship ye-DHL yokuHanjiswa kwaMazwe ngaMazwe e-Philippines
Okulandelayo: Ummeli wokuwisa